Playlist on Spotify na hazie ha na nke a
Ọ bụ Mfe Mepụta a Playlist on Spotify na hazie ha na a Reference
Spotify nwere ihe karịrị nde 30 songs na bụ otu n'ime ndị kasị ibu dijitalụ / online music ọrụ dị taa. Na ọtụtụ songs dị na ya katalọgụ, ọ na-aghọ nnọọ mfe n'ihi na otu onye Iji mepụta listi ọkpụkpọ na-etinye ọnụ haphazardly. Nke a na-eme a otutu Spotify ọrụ, n'ihi ya, ọ bụghị nanị gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị maara banyere ole na ole bara uru atụmatụ on Spotify, ị ga-enwe ike ọcha na chịkọta gị Spotify listi ọkpụkpọ na a n'ụzọ na ị pụrụ ịchọta songs kpọmkwem otú ị chọrọ ha. Ka anyị gaa ihe ndị a otu otu.
Part 1. Olee otú ike Spotify listi ọkpụkpọ
Part 2.How ịhazi Spotify listi ọkpụkpọ
Share Spotify listi ọkpụkpọ na download music free na TunesGo
Nkebi nke 1 - Olee otú ike Spotify listi ọkpụkpọ
Mepụta na aha Spotify nchekwa
E nwere ụzọ abụọ nke na-eke a Spotify nchekwa, ị nwere ike ma na-aga Njikwa> New Playlist nchekwa ma na-a ọhụrụ playlist nchekwa na n'elu nke ngalaba 'Playlist' ma ọ bụ ị pụrụ nanị nri pịa bụla na ngalaba 'Playlist' na mgbe ahụ họrọ New nchekwa si menu na-ọhụrụ nchekwa na ebe. Iji nyegharịa, nanị pịa na nchekwa ugbu a aha ugboro abụọ na overwrite ya ihe ọ bụla ị chọrọ.
Mepụta na aha Spotify listi ọkpụkpọ
Iji ike na aha a ọhụrụ playlist, ị nwere ike ma pịa na nhọrọ '+ New Playlist' si n'okpuru Collections Atiya ma ọ bụ i nwere ike gaa Njikwa> New Playlist. Na, n'ihi na-agbanwe agbanwe na aha nke playlist, nnọọ pịa ya otu ugboro / họrọ ya na mgbe ahụ pịa ya otu ugboro ọzọ ọzọ sekọnd ole na ole, nke ga-ugbu a ka i overwrite nke ugbu a aha na-agbanwe ya.
Part 2 - Olee otú ịhazi Spotify listi ọkpụkpọ
Megharia nchekwa, listi ọkpụkpọ na tracks / songs
Ugbu a, na Spotify, ị na-adịghị enweta ihe nhọrọ nke rearranging nchekwa na, listi ọkpụkpọ ma ọ bụ songs-akpaghị aka na keabiidii iji ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ihe niile a ga-eme aka mgbe ọ na-abịa Ịhazigharị ihe ị nwere na akaụntụ gị. Otu ihe ọma ezie bụ nnọọ mfe iji Dọrọ na dobe atụmatụ na-eme ka ndụ gị mfe. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ hazie gị nchekwa, listi ọkpụkpọ ma ọ bụ tacks, nanị ịdọrọ na dobe ha na iji nke mmasị gị.
Wepụ oyiri tracks si a playlist
<P> N'ụzọ dị mwute, Spotify adịghị gwa gị na agbanyeghị ma ọ bụrụ na a oyiri track a na-kwukwara site ị n'amaghị ama. Nke a bụ nnukwu downer na echiche anyị. N'agbanyeghị nke ahụ, nke ahụ apụtaghị na na ị gaghị na-oyiri tracks anya gị playlist. Na Spotify, ndị kasị mma usoro nke weeding si na oyiri songs bụ na-akpa-idozi gị egwu ọkpụkpọ site na iji otu nke kọlụm nkụnye ndị eji isi mee (omenkà, egwu ma ọ bụ oge) na mgbe ahụ anya maka yiri na ihichapụ ndị ị hụrụ.
Tinye a song ka a playlist
Otu nke kasị mma ngwaọrụ Spotify bụ Radio atụmatụ na-enye gị ohere achọpụta ọhụrụ music. Na, oké ihe bụ na ọ bụghị nanị na-enye gị ohere na-ege ntị ọhụrụ songs kamakwa tinye ha gị playlist nke ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-amasị a song on Radio na ị na-ege ntị, nnọọ pịa aha ya ka ị na-ẹka na ihuenyo na album echiche na ugbu a, dị nnọọ ịdọrọ na dobe họrọ song gị playlist ịgbakwunye ya. I nwekwara ike ime nke a na songs na ị na-ama gere ntị na n'oge gara aga, site na ịga na nhọrọ 'Play kwụ n'ahịrị' site n'aka ekpe n'akụkụ aka nke ihuenyo na mgbe ahụ na ịpị na nhọrọ 'History'.
Naghachi a ehichapụ Spotify playlist
Biri ihichapụ a playlist na ị na-achọghị ka? Echegbula onwe gị, dị ka ọ bụ nnọọ mfe iji nweta ya azụ. Nanị abanye na akaụntụ gị na Spotify.com na họrọ nhọrọ Akaụntụ. Ugbu a, n'elu, ị ga-ahụ a ndepụta nhọrọ na ikpeazụ otu ịbụ 'Naghachi Playlist'. Ọ bụrụ na ị họrọ a nhọrọ, ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ niile ehichapụ listi ọkpụkpọ na n'oge gara aga na nhọrọ 'Weghachi' onye ọ bụla n'ime ha ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Na oge ị na 'Weghachi' onye ọ bụla n'ime ha, ka playlist ga-ozugbo sinanfiputa na akaụntụ gị.
Categorize listi ọkpụkpọ na nchekwa
Categorization nke listi ọkpụkpọ na nchekwa na Spotify adabere ukwuu na onye. Anyị ahụwo na Spotify ọrụ hazie ha listi ọkpụkpọ na nchekwa dị iche iche, na-adabere n'otú na ihe / mgbe ha na-ege ntị na ya. Anyị na-aga depụta ụfọdụ n'ime ndị a nkịtị ụzọ na a otutu ọrụ nakweere; na-eche na-eji ha ma ọ bụ mix na egwuregwu dị ka ị na-eche.
1. Jikọta site Genre - Ịmepụta listi ọkpụkpọ na nchekwa na iji nhazi ọkwa nke genre, bụ a nkịtị otu. Ị nwere ike ịmepụta nchekwa na aha mmado - Hip iwuli elu, Oge gboo, Pop Rock, Indie, Bad ọtụtụ ndị ọzọ dị ka ndị dị otú ahụ. Ị nwere ike mgbe tinye kpọmkwem listi ọkpụkpọ n'okpuru ndị a nchekwa ka ihe atụ, a playlist aha ya bụ '80s' ga-dabara nke ọma n'ime nchekwa nke 'Pop Rock' na otú banyere 'Violin' n'okpuru nchekwa 'Oge gboo'.
Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị na nchekwa aha na ị nwere ike ịga na nke gị ma ọ bụ na-echiche si.
Ndị mmadụ na-
2. Jikọta site Artist - Ịmepụta listi ọkpụkpọ dị iche iche Artists bụ ihe ọzọ na fun ụzọ ahazi tracks. N'eziokwu, i nwere ike tinye ọkacha mmasị gị na-ese dum discography n'okpuru otu playlist, nke mere na ị nwere onye ọ bụla nke songs na akpan akpan omenka mgbe ẹkwọ.
3. Jikọta site Omume ma ọ bụ Arụ Ọrụ - Chọrọ kpọmkwem songs maka ndị ogologo ụzọ njem ị na-ma ọ bụ mgbe ị na-aga n'ihi na a na-agba ọsọ, nakwa mgbe ahụ bụ kpọmkwem otú ị ga-ike gị nchekwa na listi ọkpụkpọ dị ka mma. Ị nwere ike aha ha na-amasị maara ihe na-enwe kpọmkwem songs na ebuli gị na ọnọdụ mgbe aku a ụfọdụ ọrụ. Anyị nakwa hụrụ ndị ọrụ nwere yiri listi ọkpụkpọ ma n'ihi na kwa ọnwa, n'ihi ya, ha nwere otu maka January, February na March na na. The ezi akụkụ bụ na i kwesịghị ịbụ nchegbu banyere agwụcha elu ihichapụ ndị a listi ọkpụkpọ ma ọ bụ nchekwa na Spotify, dị ka ị nwere ike mgbe niile ha dịghachi na enyemaka nke a ole na ole clicks.
Atụmatụ maka Spotify Portable
Ọ bụ Mfe Mepụta a Playlist on Spotify na hazie Ha
> Resource> Spotify> Ọ bụ Mfe Mepụta a Playlist on Spotify na hazie Ha